हरित अर्थतन्त्र: डा मणी नेपाल,७४ प्रतिशत ऊर्जाको स्रोत बायोमासमा निर्भर - Artha Path Artha Path
हरित अर्थतन्त्र: डा मणी नेपाल,७४ प्रतिशत ऊर्जाको स्रोत बायोमासमा निर्भर
प्रकाशित मिति : २८ भाद्र २०७७, आईतवार
काठमाडौं । हिमालय क्षेत्रमा पर्यावरणीय अनुसन्धान गर्दै आएको अन्तरसरकारी संस्था इसिमोडका प्रमुख अर्थशास्त्री डा. मणी नेपालले मुलुकको ऊर्जा उपयोग प्रबृत्ती बदल्नुपर्ने बताएका छन् । उनले विश्वब्यापी ऊर्जा खपतको प्रबृत्तीसँग नेपालको तालमेल नभएको बताए । अत्यधिक प्रदुषण गर्ने र तीव्र वन फँडानीमा सघाउने बायोमास (दाउरालगायत) को उपयोग नेपालमा अत्यधिक भएको उनले बताए । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आइतवार आयोजना गरेको ‘हरित अर्थतन्त्र’ सम्बन्धि भर्चुअल अन्तरक्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
अन्तरराष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले केही महिनाअघि नेपालमा अहिले पनि ७४ प्रतिशत ऊर्जाको स्रोत बायोमासमा निर्भर रहेको तथ्यांक प्रकाशित गरेको थियो । जबकी, विश्व ऊर्जा खपतमा बायोमासको हिस्सा ९ प्रतिशत हाराहारीमात्र छ । नेपालमा ८८ प्रतिशत ऊर्जा खपत कृषि एवम् गार्हस्थ उपयोगमा हुने गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा ४ प्रतिशत र यातायातमा ७ प्रतिशत ऊर्जा खपत हुने गरेको तथ्यांक छ । धेरै ऊर्जा चुल्होचौकोमा खपत हुने भएकाले यसले पर्यावरणमात्र होइन, मानव स्वास्थ्यमा समेत सीधा घातक असर गरिरहेको डा. नेपालले बताए । ‘अहिले विश्वमा वायुप्रदुषणबाट वर्षेनी ७० लाख मान्छेको मृत्यु हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो वर्षभरीमा हुने युद्ध, हत्या र टीबी, एचआईभी एड्स र मलेरियाजस्ता घातक रोगका कारण हुने कुल मृत्युभन्दा पनि बढी हो ।’
चुल्होबाट निस्कने धुवाँ मानव स्वास्थ्यका लागि निकै घातक हुने वैज्ञानिकहरुले बताउँदै आएका छन् । यससँगै पकाउन र आगो ताप्न प्रयोग हुने दाउराका कारण वन फँडानी बढ्दा प्राकृतिक प्रकोप र जलस्रोत सुक्ने जोखिम बढिरकेको उनले बताए । अर्कातिर हानिकारक ग्यासको उत्पादनले जलवायु परिवर्तनमा समेत प्रतिकुल प्रभाव परेको डा नेपाल बताउँछन् ।
ऊर्जाको स्रोतमा मात्र होइन, शहरीकरण र औद्योगिक विकासमा पनि दिगो र हरित विकास रणनीतिलाई अङ्गीकार गर्न नसकिएको उनले बताए । न्यून कार्बन उत्सर्जन, दीगो लाभ, स्रोतको समुचित उपयोग र समावेशी विकासलाई हरित अर्थतन्त्रको आधार मान्न सकिने उनले बताए ।
विकास तथा वातावरणीय अर्थशास्त्रीहरुको दक्षिण एसियाली सञ्जालका संयोजक समेत रहेका डा नेपालले अहिले खाना पकाउने ग्यासमा दिएको अनुदान हटाइदिने हो भने नेपालमा पनि विद्युत्मा खाना पकाउने प्रबृत्ती बढ्ने बताए । ग्यासको अनुदान न्यून आय भएका गार्हस्थ विद्युत् उपभोक्तालाई दिन सकिने उनले सुझाए । तर विद्युत्को आपूर्तिमा हुने समस्याले विस्वशनीयता तयार हुन नसकेको भन्दै उनले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, बायोमास अहिलेकै अवस्थामा निकै खराब भए पनि चुल्हो सुधार गर्ने र जंगलको दीगो खपत गर्ने हो भने लाभदायक हुनसक्ने उनको बुझाइ छ । चुल्हो सुधारमा अहिले भइरहेका प्रयासहरु पर्याप्त नभएको भन्दै सर्वसुलभ र उपयोगी प्रविधीको विकासमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनले सुझाए । ‘सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । तत्काल विद्युतीय प्रविधीमा लान नसक्ने लामो दूरी र बढी भार बोक्ले मालबाहक गाडीमा अहिलेजस्तै जैविक इन्धनको प्रयोग गर्दा पनि वातावरणीय क्षेतीलाई क मगर्न सकिन्छ’, उनले भने ।
नेपालमा शहरी क्षेत्रका घरको निर्माण पनि हरित अर्थतन्त्रसँग समाबद्ध नभएको बताए । घर निर्माणको प्रविधी, कच्चा पदार्थ र आकारलाई पुनरविचार गर्नु आवस्यक भएको उनले बताए । कम ऊर्जाको उपयोग गर्ने किसिमकले भौतिक संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । ऊर्जाको उपयोगितामात्र होइन, मावन स्वास्थ्य र मानसिक बृत्तिविकासमा पनि भौतिक संरचनाको आकृतिले असर पार्छ भन्ने प्राचिन वास्तुकलामा पनि उल्लेख छ ।
उनले नेपालमा ऊर्जासँग सम्बद्ध नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, आयल निगम, वैकल्पिक ऊर्जा प्रबद्र्धन केन्द्र र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच कुनै नीतिगत सम्बन्ध स्थापित गर्ने सेतु तयार पार्न आवस्यक भएको बताए । त्यस्तै, फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई स्थानीय सरकारहरुले चासो नदिएको भन्दै उनले यस्ता कुरा प्राथमिकता सूचीको अग्रभागमा समावेश गर्नुपर्ने पनि बताए । नीति निर्माणमा नेपालले निकै काम गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा पर्यावरण सुरक्षा र हरित विकासको एजेण्डा फलदायी हुने नसकेको उनको बुझाइ छ ।
पछिल्लो समय विश्वमा नविकरणीय ऊर्जाको प्रयोगले उत्पादनको लागत निकै बढ्ने र अर्थतन्त्रमा भारी महँगि बढ्ने जोखिम पनि औंल्याइँदै आएको छ । डा नेपालले प्रविधीको समानान्तर विकासमार्फत् त्यस्ता जोखिमको व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए । विद्युतीय उपकरणहरुको अनुसन्धानमा लगानी बढाएमा अहिले अनुमान गरेभन्दा निकै सस्तो लागतमा नयाँ प्रविधीको विकास गर्न सकिने उनले बताए । अहिले केही विद्वानहरुले विद्यमान प्रविधीको आधारमा विश्लेषण गरेर गलत सूचना प्रसार गरिरहेको उनको आरोप छ ।
उनले विकास र वातावरणको विषयमा हुने द्वन्द्वहरुलाई पनि विकल्पका बारे बहसबाट निचोडमा पु¥याउन सकिने बताए । नेपालमा खासगरी निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका बारे ज्यादै विबाद भएका छन् । तर सरकारले त्यस्ता आयोजनाका सम्भावित वातावरणीय जोखिम कति हो, त्यसलाई के कस्ता विधीबाट कुन हदसम्म क मगर्ने प्रयास भयो र बाँकी जोखिमको परिपुरण कसरी हुन्छ भन्ने विकल्प जनसमक्ष ल्याउन नसकेको उनले बताए । यस्ता बृहद आयोजनाका सवालमा विकल्पबारे सार्वजनिक छलफल गर्ने हो भने विबादको व्यवस्थापनमात्र होइन, दिगो र समावेशी विकासमा फड्को मार्न सकिने उनले बताए । उनले वातवारणीय स्रोतको दोहनबाट हुने लाभको पुनरवितरण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र विकास गरेर द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
डा नेपालले पर्यावरणीय स्रोतको दीगो र समावेशी उपयोगबारे नयाँ बाटोहरु पनि खोजि गर्नुपर्ने बताए । ‘आयुर्वेदिक चिकित्सालाई अध्ययन गरेर नेपालका जडिबुटीको प्रबद्र्धन गर्न सकियो भने यसले ग्रामीण अर्थव्यवस्था र औद्योगिक प्रबद्र्धन दुबैमा सघाउ पुग्छ,’ उनले भने । अहिले कोभीड १९को कारण आयुर्वेदको महत्व बढेको छ । यसबाट मानिसहरुको जिवनस्तर उकास्न र औद्योगिक विकास गर्न सकिने उनी बताउँछन् । ‘हाम्रा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीलाई राजनीति गर्ने होइन, विकास गर्ने भन्ने अभियानमा केन्द्रित गर्ने हो भने चीनले जस्तै हामीले पनि निकै चाँडो गरिबी घटाउन सक्छौं,’ उनले भने । अर्थतन्त्रमा पर्यावरणीय स्रोतको उपयोगमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
पछिल्लो समय विश्वमा जैविक विविधता एवम् पर्यावरणीय स्रोतलाई अर्थतन्त्रको हिस्साको रुपमा गणना गर्नुपर्ने बहस चुलिँदै आएको छ । त्यसो भयो भने कुल गार्हस्थ उत्पादनका आधरमा हुने गणनाले देखाउने अर्थतन्त्रको आकारमा ठूलो फेरबदल आउन सक्ने डा नेपाल बताउँछन् । ‘क्लब अफ रोम’ले सन् १९७२ मा ‘लिमीट टु ग्रोथ’ भन्ने अध्ययन प्रतिवेदन निकाल्यो । त्यो संसारका ३० भाषामा ३ करोडप्रति विक्री भयो । उनी दीगो विकास र हरित अर्थतन्त्रको आधार पत्र त्यही प्रतिवेदनलाई मान्छन् । जसले पृथ्वीको अतिदोहनको परिणाम निकै घातक हुने औल्याएको थियो । त्यसपछि सुरु भएको पर्यावरणको दीगो उपयोगबारेको बहस अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रममा पनि दीगो विकास लक्ष्यको रुपमा स्थापित भइसकेको छ ।
स्टार्टअप आइडियामाथि लगानी बढाउन सरकारसँग माग
काठमाडौं । समृद्धि स्कुल र विशाल फाउण्डेशनको संयुक्त आयोजनामा राजधानीमा सम्पन्न भएको योङ आन्ट्रपर्नस कन्ल्लेभ
बुधबार नेप्से २९ अंकले बढ्यो, ४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको कारोबार
काठमाडौं । बुधबार नेप्से २८.८९ अंकले बढेर १,७०७.६७ अंकमा रोकिएको छ । बुधबार १९५ कम्पनीको
मुक्तिनाथ विकास बैंकको नेपाल राष्ट्र बैंक र के.एफ.डब्लु डेभलपमेन्ट बैंकबीच सम्झौता
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक र के.एफ. डब्लु डेभलपमेन्ट बैंक सँग त्रिपक्षीय
लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको ८ लाख ५८ हजार कित्ता कित्ता बोनस सूचीकृत
काठमाडौं । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको साढे ८ लाख कित्ता बोनस सूचीकृत भएको छ । इन्स्योरेन्सले
सनराइज बैंकमा इन्टर्नसिपको अवसर, १२ पासले पनि अवसर
सिटिजन्स बैंकमा ठुलो संख्यामा कर्मचारी आवश्यकता (फारम भर्ने
सातै प्रदेशमा धेरै संख्यामा विभिन्न पदका लागि कर्मचारी
चाइना अदातलबाट मुद्धा जितेपछि बैंक अफ काठमाण्डूका सीईओ